Handany Samirery Ny Alin’ny Krismasy? Manana Ny Ambarany Ny Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2014 14:34 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, Español, srpski, 日本語, Italiano, polski, Ελληνικά, English
Tato anatnny taona vitsy, anefa, tsy hoe fotsiny nitontongana ny taham-pahaterahana tao Japana, fa koa ny isan'ny olona miditra amin'ny fanambadiana ary hatramin'ireo mifanao fotoana aza.
Ny Novambra 2014, olona teo amin'ny 1.800 tao amin'ny faritra manodidina ny tanànan'i Tokyo renivohitra, teo anelanelan'ny 20 sy 30 taona, no nanaovan'ny OpenTable, tolotra ety anaty aterineto fanaovana famandrihan-toerana aminà trano fisakafoana. Araka ny valin'ny fanadihadiana, eo amin'ny 60 isanjaton'ireo namaly no nilaza fa tsy manana fifamatorana maharitra izy ireo na tsy manana fifanomezam-potoana akory.
Ny tena misy lanjany ho an'ireo tomponà trano fisakafoana anefa dia ny momba ireo 43 isanjaton'io fanadihadiana ny eo anelanelan'ny 20-30 taona io, izay nilaza fa tsy handany mihoatra ny 100 dolara amerikana ry zareo ho fankalazany ny Alin'ny Krismasy, zavatra iray mifangarika amin'izay fanjifàn'ireo andian-taranaka nisy tany amin'ny 25 taona lasa, fony tsy nisy fetrany ny fandaniana ho anà alina goavana iray hifanaovana fotoana.
Eto ny mpanoratra dia mampiasa ny fomba fiteny hoe リア充, na “ria ju,” fomba fitenin'ny Japoney ety anaty aterineto izay azo ampifandraisina amin'ny IRL (in real life – amin'ny fiainana tena izy).